Raito Mitoxantrone HCL powder supplie (70476-82-3) hplc = 98% | AASraw
/ Products / MaR & D Reagents / Mitoxantrone HCL upfu
Rating: SKU: 70476-82-3. Category: MaR & D Reagents
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva ku gram kusvika mukuraira kweMitoxantrone HCL powder (70476-82-3), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Mitoxantrone hydrochloride powder mushonga wekenza unokanganisa kukura nekupararira kwemasero ekenza mumuviri. Mitoxantrone HCL upfu inoshandiswa kurapa kenza yeprostate uye mamwe marudzi eleukemia. Mitoxantrone HCL powder inoshandiswawo kurapa zviratidzo zvekudzokazve multiple sclerosis. Mushonga uyu haurape multiple sclerosis.
Mitoxantrone hydrochloride powder video
Mitoxantrone hydrochloride powder Basic Characters
Name: Mitoxantrone hydrochloride powder
Molecular Formula: C22H30Cl2N4O6
Molecular Kurema: 517.4
Mitoxantrone hydrochloride powder mukushandiswa
Zita Rekushandisa: Novantrone
Kemikari Zita: 1,4-dihydroxy-5,8-bis [[2- [2-hydroxyethyl] amino] ethyl] amino] 9,10-anthracenedione dihydrochloride
Mitoxantrone hydrochloride powder Usage
Chimwe chezvikamu zvakasiyana-siyana zvemakemikrasi rinoshandiswa mukuregererwa kwekuregererwa mumakumbo anonzi myeloid (myelogenous, nonlymphocytic) leukemia (AML, ANLL). AML inosanganisira acute promyelocytic, monocytic, myelomonocytic, megakaryoblastic, uye erythroid leukemias.
Inoshandiswa mukubatana nemamwe mafungiro eine antinoplastic in therapization therapy regimens inotevera kuiswa kwekuregererwa kwakakwana.
Inoshandiswa seimwe sarimeni yekurapa kwokutanga kufambisa mberi, zviratidzo (kureva, zvinorwadza) kenza-hormone-refractory prostate (pamwe ne prednisone). Inoshandiswa kutanga-mutsara wehutano hweHommone-refractory mastrasetic prostate kansa iscetaxel pamwe ne prednisone.
Kurapa kwechipiri (chisingagumi) kufambira mberi, kufambira mberi-kudzokazve, kana kuwedzera kukura-kudzorera MS. Yakashandiswa kuderedza kuora mwoyo kweuropiti uye / kana kuwanda kwekudzoka zvakare.
Yakadzidziswa nevarwere vane hutachiona hunotevera: Kuwedzera kukuremara kana kuti pasina chiremba chinodzokorora zvakare (kuchikoro chechipiri chinopfuurira mberi uye chinoramba chichidzokazve) uye kuchipatara kunokonzerwa nekuwedzera kuwedzera kwekuremara, neine hutano husina kuchena hwehutano pakati pekudzokazve (kuwedzera kuorazve- remitting disease).
Kwete kukurudzirwa kuti ishandiswe nevarwere vane primary progressive MS.
Haifanire kushandiswa pakurapa MS mune varwere vane yekutanga basiti LVEF <50% (seemyocardial chepfu mune yambiro bhokisi). kazhinji haina kukurudzirwa kuti ishandise avo vane hutachiona husingaoneki (ona pasi peyambiro) kana neutrophil kuverenga <1500 / mm3.
Inoshandiswa sechikamu chemishonga yekemotherapy inoshandiswa kurapwa kwekodhi-grade ye-non-Hodgkin's lymphoma †.
Chii chinonzi mitoxantrone hydrochloride powder
Inowanikwa seMitoxantrone hydrochloride powder; muyero wakaratidzwa maererano nemitoxantrone HCL powder.
12 mg / m2 zuva rimwe nerimwe pamazuva 1-3 pamwe chete ne-cytarabine 100 mg / m2 zuva nezuva (sehupenyu hunoramba huchiwedzera mumaawa 24) mumazuva 1-7.
Kana antileukemic mhinduro kune yekutanga induction kosi isina kukwana, yechipiri induction kosi inosanganisira mazuva maviri emitoxantrone HCL powder (2 mg / m12 zuva nezuva) uye mazuva mashanu ecytarabine (2 mg / m5 zuva nezuva) anogona kupihwa.
Kana chirwere chakanyanya kana chinopisa upenyu chisingaoneki chinowanikwa munguva yekutanga induction course, rega kudzidzira muchikoro chekudzidzira kusvika kusarudzo kugadzirisa.
12 mg / m2 zuva rimwe nerimwe pamazuva 1 uye 2 pamwe chete ne cytarabine 100 mg / m2 zuva rega rega (sechirwere chinopfuurirwa IV pamusoro peawa 24) mumazuva 1-5. Kutarisira chikamu chekugadzirisa kwemaawa anenge masvondo e6 mushure mekudzidza kwekupedzisira yekudzidzira; kutungamira chechipiri chekubatanidza dzidzo kazhinji masvondo e4 mushure mekudzidzira kwekutanga.
12-14 mg / m2 kamwe chete mazuva makumi maviri nerimwe; ipa sechirevo chekorticosteroid therapy (semuenzaniso, prednisone 21 mg muromo kaviri pazuva, hydrocortisone 5 mg muromo zuva nezuva). Vamwe varapi vanokurudzira kurega kwemitoxantrone HCL upfu (uye kuenderera kwecorticosteroid kurapa chete) kune varwere vachiri kupindura mushure mekuwedzera mitoxantrone HCL poda dhizaini ye40 mg / m140 nekuda kwenjodzi yehutachiona hwemwoyo.
12 mg / m2 kamwe kamwe mwedzi 3.
Maximum cumulative lifetime dose: 140 mg / m2.
Kuderedza kubviswa; kuwedzerwa kuyerwa kunogona kudiwa, zvisinei, kwete dhiyoiyo yekugadzirisa mazano. (Ona kuora kweHepatic under Caution.)
Kuderedza kuwanda hakufaniri kudiwa.
Chiitiko Chekuchengetedza Chiremba
Kutarisira chete pasi pekutarisirwa kwevanakiriniki vanogona kushandisa mukushandiswa kwe cytotoxic therapy.
Gadzirisa zvishoma nezvishoma mumhepo yakasununguka inopinda muchina. Usatungamirire neI, sub-Q, intra-arterial, kana intrathecal injection.
Zvakawanda zvemukati tissue necrosis kana extravasation inoitika. (Ona Migumisiro yeMunharaunda pasi peChenjedzo.)
Inonzi neurotoxicity yakaoma uye dzimwe nguva isingagoni kuregererwa ichitsvaga ichitevera hutungamiri hwenyika. (Ona Neurotoxicity under Cautions.)
Kunyanya myelosuppression kunogona kuitika. Kazhinji dzivisa kushandiswa kune varwere vane baseline neutrophil kuverenga <1500 / mm3, kunze kwekurapwa kweacute myeloid (myelogenous, nonlymphocytic) leukemia. chengetedza hematologic chimiro zvakanyatso. (ona mhedzisiro pasi peyambiro.)
Zvichida cardiotoxicity uye inogona kuuraya CHF mumwedzi kana mwedzi kusvika makore shure kwerapi; ngozi inowedzera nekuwedzera kuwedzera kwemazi.
Zvimwe zvinokonzera njodzi (nhoroondo kana kuti ikozvino yomuviri wepfungwa, inotangira kana kuti inogadzirisisa irradiation kumadzinza / pericardial, nzvimbo yekare yakagadziriswa nedzimwe anthracyclines kana anthracenediones, kana kushandiswa kwechimwe chetero cardiotoxic zvinodhaka) kunogona kuwedzera ngozi ye cardiotoxicity. Kunyange zvakadaro, kutyisa kunogona kuitika pasinei nokuti inokonzerwa nehutano hwemwoyo iripo. (Ona Cardiotoxicity pasi peChenjedzo.)
Njodzi yeCF inokura nevanorwara nekenza inofungidzirwa kuva 2.6% pamutengo wekuwedzera kusvika ku 140 mg / m2.
Usati watanga kurapwa, rongedza varwere vose nokuda kwechirwere chepfungwa / zviratidzo nezvakaitika kare uye kuongorora kwepanyama uye tsvaga mutsara wekutanga we ventricular ejection fraction (LVEF) ne echocardiogram kana kuti yakawandisa radionuclide angiography (MUGA).
Usatange kurapwa mune varwere vane multiple sclerosis kana yekutanga LVEF iri <50%.
Mune varwere vane multiple sclerosis, ongorora LVEF ne echocardiogram kana MUGA pamberi peimwe dosi; usape mamwe madhizaini kana LVEF ikadzikira ku <50% kana kana kukiriniki kwakakosha kuderedzwa kwe lvef kunoitika.
Varwere vane multiple sclerosis havafanirwe kugamuchira inowedzera huwandu> 140 mg / m2.
Secondary Acute Myelogenous Leukemia (AML)
Secondary AML yakataurwa nevarwere vakabata mitoxantrone HCL powder; pangozi ye refractory secondary leukemias inowedzera apo anthracyclines inosanganiswa nedzimwe DNA-inokuvadza antiineoplastics, mushure mokunge yakanyanya kujekeswa nemishonga inonzi cytotoxic, kana kuti maitiro anthracycline akawedzerwa. (Ona Carcinogenicity under Caution.)
Mitoxantrone HCL powder Iine Matambudziko Api
Kazhinji zvakataurwa nemigumisiro ye mitoxantrone inosanganisira: hutachiona, kuputika kwepamusoro kwehutachiona, hutachiona hwehutachiona, utachiona hwehutachiona, fungal yepachirwere chetachiona, sepsis, alopecia, amenorrhea, cardiac arrhythmia, kuzvirambidza, kurwara, chirwere chisina kuchena, kushaya ropa, kuwedzera gamma-glutamyl transferase, leukopenia, menstrual illness, nausea, stomatitis, urin abnormality, kurwadziwa mumimba, aphthous stomatitis, asthenia, kutsva kwemaviri emimba, kukwezva, kuderedza hemoglobin, kupera kwechichena masero eropa, dyspnea, edema, kurwadziwa kwepagastric, fatigue, fever, hematuria, hyperglycemia, hypocalcemia, hypokalemia, yakawedzerwa serum glucose, lymphocytopenia, mucositis, pharyngitis, rhinitis, kurwadziwa kwepamu, thrombocytopenia, kurutsa, kuwandisa, kushaya muviri, kusagadzikana zvachose neutrophil count, anorexia, malaise, uye nailbedchanges. Dzimwe mimwe migumisiro inosanganisira: pneumonia, renal failure syndrome, seizure, skininfection, anemia, kurwadziwa shure, granulocytopenia, musoro, sinusitis, kuzvidya mwoyo, arthralgia, conjunctivitis, kuora mwoyo, dyspepsia, kuora kwemwedzi, kushaya ropa, hypertension, hyponatremia, kusava nesimba, kuwedzera serum alanine aminotransferase, yakawedzera serum aspartate aminotransferase, ischemic heart disease, myalgia, kurwadziwa, petechia, proteinuria, sterility, kupwanya, chills, diaphoresis, uye zvirwere. Ona pasi apa kuti urege kunyatsonzwisisa mhinduro yemigumisiro yakaipa.
Nzira yekutenga Mitoxantrone hydrochloride powder kubva kuAASraw
LCZ696 powder (936623-90-4)